Showing posts sorted by relevance for query Eleven Media Group. Sort by date Show all posts
12/19/2013 06:15:00 AM crime-news
6/12/2014 08:18:00 PM Myanmar-news
12/19/2013 07:30:00 AM crime-news
Eleven Media Group သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့ သတင်းသမားများက သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
12/28/2013 12:11:00 PM crime-news
Eleven Media Group သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် မန္တလေးမြို့ခံ သတင်းသမားများက သဘောထား ကြေညာချက် တစ်ရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက် မခိုင်ကို လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်သုံးလ ချမှတ်ခြင်းအပေါ် မန္တလေး သတင်းသမားများက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်နေသည့်အပေါ် ယခုလို သတင်းထောက် တစ်ဦးကို အချိန်တစ်လကျော် အတွင်းသာ အမှုစစ်ဆေးပြီး ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းသည် အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေသည်။ သတင်းသမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရေးသား ဖော်ထုတ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုသည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ချီတက်နေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်ဟု မန္တလေး သတင်းသမားများက သုံးသပ်သည်။ သတင်းသမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) နှင့် ကြိုတင်တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းခြင်း ပြုလုပ်ပြီးမှသာ တရားစွဲဆို ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မန္တလေးသတင်းသမားက ဆန္ဒရှိသည်။
သို့ပါ၍ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ပြန်လည် စိစစ်ပေးရန်နှင့် ယခုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိနေကြောင်း ကြားသိနေရသဖြင့် မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် သဘောထား ကြေညာချက်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထို့အတူ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ စိစစ်စုံစမ်းခြင်း မရှိပါက မန္တလေးမြို့ခံ သတင်းသမား ၁၀၀ ခန့်က စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားရန်လည်း စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
12/21/2013 02:13:00 PM Myanmar-news world-news
Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် Myanmar Journalists Network မှ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
12/21/2013 01:18:00 PM Myanmar-news
Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခဲ့ခြင်းအပေါ် Myanmar Journalists Network (မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်) မှ သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်က Myanmar Journalists Network ၏ တာဝန်ရှိသူများ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ တရားဝင် Facebook ပေါ်တွင် အချက် ငါးချက်ပါ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပထမဆုံးအဖြစ် လွိုင်ကော်မြို့မှ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက် နော်ခိုင်ခိုင်အေးချို (ခ)မခိုင်အား သတင်းရယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ကျော်နင်းမှုဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးမှ ဒုမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးမြမင်းဟန်က ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ထောင်ဒဏ်သုံးလ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအတွက် Myanmar Journalists Network မှ ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထားများတွင် (၁) မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ မေးခွန်းထုတ် နေချိန်တွင် Eleven Media Group မှ အမျိုးသမီး သတင်းထောက် တစ်ဦးကို လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ်သုံးလ စီရင်ချက် ချမှတ်လိုက်ခြင်းသည် သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်သည်။
(၂) ယခုဖြစ်စဉ်သည် သတင်းထောက်များ အခြေခံ အခွင့်အရေးဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အဖြစ်အပျက်မှန်ကို သက်ဆိုင်ရာ အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးပြီး မှန်ကန်မျှတသည့် တရားစီရင်မှု ဖြစ်စေရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှ တောင်းဆိုသည်။
(၃) သတင်းထောက် နော်ခိုင်ခိုင်အေး ချို (ခ) မခိုင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာစာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) အနေဖြင့်လည်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
(၄) မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်သည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် သတင်းသမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ရည်ညွှန်း ဖွဲ့စည်းထားသော ကွန်ရက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သတင်းထောက်မခိုင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း အပါအ၀င် တတ်စွမ်းသမျှ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ မဏ္ဍိုင်ကြီးများနှင့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သည့် သတင်းမီဒီယာများနှင့် ပွတ်တိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် နိုင်သဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး နောင်အနာဂတ်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များ ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်များကို တရားဝင်စာဖြင့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ရုံး၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံးများသို့လည်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ပါ ဆက်လက်ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်မှ မှားယွင်းထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး AGD ဘဏ်အနေဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ထားကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်နှင့် ပူးတွဲရှင်းလင်း
3/12/2014 01:35:00 PM Myanmar-news
(AGD ဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက မီဒီယာများအား ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်)
ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနက AGD ဘဏ်အပါအ၀င် အခွန်မဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀၀ ကျော်စာရင်းထုတ်ပြန်မှုမှာ ကွန်ပျူတာမှားယွင်းမှုကြောင့် အခွန်ဦးစီးဌာနဘက်မှ စာရင်းမှားယွင်းထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး AGD ဘဏ်သည် အခွန်ပေးဆောင်ကြောင်း AGD ဘဏ်နှင့် အခွန်ဦးစီးဌာနတို့ ပူးတွဲရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားကို မတ် ၁၁ ရက်က ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ AGD ဘဏ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ရှင်းလင်းပွဲသို့ AGD ဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကုမ္ပဏီများ အခွန်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မတ် ၁၁ ရက်ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာတွင်ပါဝင်သည့် AGD ဘဏ်နှင့် Yoma ဘဏ်တို့ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အခွန်မပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀၀ ကျော်တွင် ပါဝင်နေသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်သည်။
"...ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Eleven မှာပါလာတဲ့အချိန်မှာ အများကြီး အံ့သြရပါတယ်။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ သိထားတယ်။ သိတဲ့အတွက် အခွန်ဦးစီးဌာနကို မေးပါတယ်။ သတင်းစာက အခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရလို့ ဖော်ပြထားလို့ပါ။ အခွန်ကလည်း သေချာရှင်းပြပါတယ်။ အခွန်မဆောင်ရသေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်သောင်းဆိုတာ သူတို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာ ကုမ္ပဏီအမည် မှားယွင်းဖော်ပြထားတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမှားယွင်းတာကလည်း ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ Error ကြောင့် အများကြီး မှားယွင်းဖော်ပြမိတာ။ အဲဒီလိုမှားယွင်းလို့ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် ..." ဟု AGD ဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
AGD ဘဏ်ဘက်မှ အခွန်ဆောင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြီး ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနဘက်မှလည်း ကွန်ပျူတာမှားယွင်းပြီး စာရင်းထုတ်ပြန်မိကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်း တောင်းပန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းကို The Daily Eleven သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းခဲ့စဉ်က ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင်သည့် စာရင်းအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မတ် ၁၁ ရက်ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မတ် ၁၀ ရက်အထိ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် AGD ဘဏ်နှင့် ရိုးမဘဏ်တို့ ၎င်းတို့ထုတ်ပြန်သည့် အခွန်မဆောင်စာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းမှာ မှားယွင်းသည်ဟု ဌာနဘက်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းလည်း မရှိသည့်အတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းဖော်ပြသည့် မတ် ၁၁ ရက် ရောက်ရှိပြီး AGD ဘဏ်ဘက်က ရှင်းလင်းပွဲလုပ်မည်ဆိုသောအချိန်ကျမှ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနဘက်က မှားယွင်းဖော်ပြမိကြောင်း၊ ကွန်ပျူတာ မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"...ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခွန်စည်းကြပ်တဲ့အခါမှာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွန်တွေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု လွတ်ကင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ အခွန်ကောက်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလေးနဲ့ ဆောင်ရွက်လိုက်ပေမယ့် အခုလို အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့အမှားပဲဖြစ်တယ်လို့ ဒီမှာဝန်ချတောင်းပန်ရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်" ဟု ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန ကုမ္ပဏီများအခွန်ဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ရှင်းလင်းပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
AGD ဘဏ်မှ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်သည့် အချိန်မှာ မတ် ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားပြီး အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲ မကျင်းပမီ မိနစ် ၂၀ အလိုတွင် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးသည် Eleven Media Group ရုံးချုပ်သို့ လာရောက်၍ မှားယွင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို လာပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲတွင် Eleven Media Group မှ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုမာန်သူရှိန်က The Daily Eleven သတင်းစာက မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အား ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာန၏ မှားယွင်းမှုသာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး The Daily Eleven သတင်းစာမှ သတင်းမှားယွင်းဖော်ပြသည်ဟု သုံးနှုန်းမှုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် AGD အား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ AGD ဘဏ်မှ ကိုရဲမင်းဦးက The Daily Eleven မှားသည်ဟု မပြောကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် "...AGD နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၃၅ ခုလောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မနှစ်တုန်းက အခွန်ထမ်းထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရ ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုလောက်ပါပါတယ်။ ၂၃ ခုက အခွန်စာရင်းမှာ ပါမလာပါဘူး။ ဒါ ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။ နောက်ထပ် Htoo Trading ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ သုံးနှစ်စာသစ်ခုတ်ခဲ့တာ နှစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော်ရှိပါတယ်" ဟု ထည့်သွင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ AGD ဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက AGD ဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကိုသာ ဖြေဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မီဒီယာများမှ မေးမြန်းမှုအပေါ် ပြန်လည်ဖြေကြားချက်အချို့
"(၁၁-၃-၂၀၁၄) အင်္ဂါနေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာပါ မှားယွင်းဖော်ပြထားသည့် သတင်းအတွက် သတင်းမီဒီယာအားလုံးသို့ သတင်းအချက်အလက်အမှန်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားသည့် အခမ်းအနား"ဟူ၍ ဖော်ပြထားသော ရှင်းလင်းပွဲတွင် AGD Bank Ltd ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက သတင်းမီဒီယာအချို့ မေးမြန်းချက်အပေါ် ဖြေကြားမှုအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကိုဝေဖြိုး (Eleven Media Group)
မေး - ဦးရဲမင်းဦးက AGD ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲ မေးပါဆိုတော့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တာပဲမေးပါ့မယ်။ AGD ဘဏ်က အခုအများပိုင်လို့ သုံးနှုန်းသွားပါတယ်။ AGD ဘဏ်ကို စတင်တည်ထောင်ကာစ အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင် AGD ဘဏ်ဟာ ထူးကုမ္ပဏီများအုပ်စုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတေဇနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သိချင်တာ ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအပေါ်မှာ ငွေဖြူပြသနိုင်မှုအခြေအနေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိလိုပါတယ်။ ငွေဖြူဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် အခွန်မည်မျှ ပေးဆောင်ထားသလဲဆိုတာပါ။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြနိုင်မလား။ အကယ်၍ ငွေကြေးခ၀ါချမှုအပါအ၀င် ဥပဒေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က စိစစ်မယ်ဆိုရင် အများပြည်သူရှေ့မှာ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစစ်ဆေးခံနိုင်သလား။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်များပြောနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဦးရဲမင်းဦး - ကျွန်တော်တို့ ၂၀၁၀ မှာ ဘဏ်လိုင်စင်ရပါတယ်။ ဘဏ်လိုင်စင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ချက် ဘာကန့်ထားလဲဆိုတော့ ၂၀ဘီလျံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြရမယ်။ ၂၀ ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြမှသာ ဘဏ်လိုင်စင်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ၂၀ ဘီလျံလုံးကိုလည်း ငွေဖြူစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွ ဗဟိုဘဏ်က စိစစ်ပြီးမှသာ ပြခွင့်ပြုပါ့မယ့်လို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာရှိတယ်။ ဒီအတွက် ဘဏ်စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ ကျပ် ၂၀ ဘီလျံ အမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုရင် ၂၀ မီလျံကျော်ကျော်လေးနဲ့ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်တည်ထောင်တဲ့ ငွေကြေးအားလုံးကို ငွေဖြူစာရွက်စာတမ်းအားလုံး တရားဝင်ပြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းပြပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ဘဏ်လိုင်စင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘဏ်ကိုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီနဲ့ဘဏ်တွေကို မီဒီယာတွေက ရောနေပါတယ်။ မတူပါဘူး။ မတူပါဘူး။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ မိမိတည်ထောင်လိုတဲ့သူတွေ စုစည်းပြီးတော့ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ authorised capital ကတော့ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ဂဏန်းပဲရေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တည်ထောင်တာ အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကို အပုံလိုက်ပြရတာပါ။ အဲဒီလိုပြတဲ့ငွေကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ငွေ ယူလာပြီးပြလို့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းနဲ့တွဲပြီး တင်ပြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပြပြီးမှသာ ကျွန်တော်တို့ကို ဘဏ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ရဲ့ capital ဟာ ၃၀ ဘီလျံရှိသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက် နှစ်စဉ်ဘဏ်ကို capital တိုးသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်တိုးရလဲဆိုတော့ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုဖွင့်တိုင်း capital တိုးရပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘဏ်ခွဲဖွင့်ရင် capital တိုးစရာမလိုပါဘူး။ ကြိုက်သလောက် ဖွင့်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုဖွင့်တိုင်း capital တိုးရပါတယ်။ တိုးတဲ့အခါမှာလည်း ငွေဖြူစာရွက်ပြရပါတယ်။ ငွေဖြူအခွန်ဆောင်ထားတဲ့စာရွက်မှာလည်း တစ်ခါတည်း ဒီဘဏ်အတွက် ဒီစာရွက်ကပြထားပြီးသားလို့ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီစာရွက်ကို နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြခွင့် မရှိပါဘူး။
ကိုဇေယျာမြတ်ခိုင် (ဒီမိုကရေစီသတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်)
မေး - ကျွန်တော်သိချင်တာက Eleven မှားတာလား၊ AGD ဘက်က၊ ပြည်တွင်းအခွန်ဘက်က မှားတာလား ဒါကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ အဖြေတစ်ခု လိုချင်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးရှိနေချိန်မှာ ရှင်းတာကောင်းပါတယ်။
ဦးရဲမင်းဦး - ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထူးထွေပြီးတော့ AGD က ဘာဖြစ်တယ်။ Eleven ကဘာဖြစ်တာဆိုတာ ပြောဖို့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီပွဲစလုပ်ထဲက အခုအချိန်ထိ Eleven ကို အခုချိန်ထိ တစ်ခွန်းမှ မစွပ်စွဲထားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရွက်တွေမှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမစွပ်စွဲထားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာက ဒီသတင်းထွက်လာတယ်။ ဒီသတင်းဟာ မှားနေတယ်။ ဘယ်သူကြောင့် မှားနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မှာ ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါသတင်းမှားနေတယ်လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မလွှဲမရှောင်သာ သတင်းစာနာမည်ကိုတော့ ထည့်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Source အနေနဲ့ ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Source အနေနဲ့ ကိုးကားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်ခွန်းမှ ဘာမှပြောထားတာ မရှိပါဘူး။ ရှင်းလင်းအောင် စာကိုဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှားတာလား သူတို့မှားတာလားဆိုတာ အစကတည်းက ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က Eleven အဖွဲ့ကို ရန်ဖြစ်ဖို့ခေါ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သေသေချာချာကို လေးလေးစားစား ဖုန်းဆက်ဖိတ်ပြီးတော့ ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒါလေးရှင်းပြမယ်။ Eleven ကလည်း ပြောချင်တာပြောမယ်။ ဒါမျိုးလေးအတွက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပဲ ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ မှားတဲ့သူကလည်းမှားကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်ကလည်း တရားဝင်ကြေညာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းကြောင်း ကြေညာတဲ့အပြင် ၀န်ချတောင်းပန်ပါတယ်လို့တောင် ခုနကစင်ပေါ်မှာ တက်ပြောသွားရဲသားနဲ့ နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ အဲဒီလူမပါဘဲနဲ့ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က ဘယ်သူမှားတာလည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော်ဖြေဖို့ တော်တော်ကြီးခက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းအခွန်ရဲ့ ခုနကပြောကြားချက်ကလည်း တော်တော်ကြီးရှင်းပါတယ်။ အဲဒီဖြေရှင်းချက်က လုံလောက်ပြီးတော့ မေးတဲ့လူကလည်း ကျေနပ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မေး - ကျွန်တော် ချယ်ရီအက်ဖ်အမ်ကပါ။ ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးတစ်ခုက AGD ဘဏ်အနေနဲ့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ မှားယွင်းတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ခုနကပြည်တွင်းအခွန်ကလည်း ပြောသွားပါတယ်။ ၇ ရက်နေ့ကတည်းက သူတို့မှားပြီး တင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ တွေ့ခဲ့တာဟာ ဒီနေ့မှတွေ့ခဲ့တာလား။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဆိုတာ ပိတ်ရက်မရှိတဲ့အတွက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာလည်း ၀င်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာကို ဒီနေ့မှသိပြီး ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဦးရဲမင်းဦး - ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းအခွန်ကနေပြီးတော့ အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ တစ်သောင်းကြေညာလိုက်တယ် ဆိုတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ခင်ဗျ၊ ကြားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်တော့မှ အခွန်မဆောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီထဲမှာမပါတဲ့အတွက် သွားမကြည့်ပါဘူး။ ညနေကျတော့မှ ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်ဖော်မေးရှင်းတော့ ယူမှလို့ဆိုပြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသတင်းမရှိတော့ပါဘူး။ မရှိတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပါတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်သူ့ကမှ ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေ အဲဒီထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတာ inform လုပ်ထားတာမရှိပါဘူး။ မရှိတော့ ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူး။ မသိတော့ ကျွန်တော်အေးအေးပဲနေပါတယ်။ ဒီနေ့နံနက် သတင်းစာထွက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှ ဒါမျိုးကြီးပါလာပြီး အဲဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်း အံ့သြပြီး အဲဒီတော့မှ အခွန်ဦးစီးဌာနကို မေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှ သတင်းစာထွက်မှ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာမထွက်ခင်အထိ ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သိဖို့လည်း ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်က အခွန်ဆောင်မထားတဲ့ စာရင်းထုတ်ပြန်တာကို သွားကြည့်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့သွားမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
1/01/2014 09:00:00 PM Myanmar-news
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်ဖိတ်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်၏ ပြောကြားမှုကို တရုတ်မီဒီယာများဖော်ပြ
1/27/2014 12:08:00 PM Myanmar-news
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရုတ်အစိုးရက ဖိတ်ကြားမည့်သတင်းကို South China Morning Post ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်က ဖော်ပြထားစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်အလည်အပတ်ခရီး ဖိတ်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု South China Morning Post သတင်းစာတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများတွင် သိသာသည့် လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လိုသော်လည်း တရုတ်အစိုးရက ဖိတ်ကြားမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်ဟု အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်အစိုးရက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖိတ်ကြားမှုများကို ယခင်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ယန်ဟူလန်းက Sunday Morning Post နှင့်ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် တရုတ်အစိုးရအနေ့ဖင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနှင့် ဆက်ဆံမှုများ ဆက်လက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစီအစဉ် အတိအကျ ရေးဆွဲထားမှု မရှိသေးသော်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးက အဆင်ပြေမည့်အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖိတ်ကြားသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ကျွန်တော်စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အကြိမ်များစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူမအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ထင်ရှားမှု၊ မြန်မာပြည်သူတွေအကြားမှာ ကျော်ကြားမှုတို့ကြောင့် တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ဖိတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယန်ကပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည့် သတင်းများ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး တရုတ်မီဒီယာများနှင့်ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူးများတွင် အဆိုပါသတင်းအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းဆိုခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်းက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်နိုင်ငံသို့ မကြာမီ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လေးဖွဲ့ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီကလည်း ပါတီ၏အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက စေလွှတ်ခဲ့သည်။
သံအမတ်ကြီးယန်က “ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေသစ်တွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို တိုးမြှင့်ဖို့ သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သိချင်ကြားချင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အကြား ယမန်နှစ်မှစ၍ ဆက်ဆံရေးများစွာ တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ သမ္မတအရည်အချင်းပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်နေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်း ယခုအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ရပ်ဆိုင်းထားသော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိနေသည်။ ထိုသို့ကြိုးပမ်းခြင်းနှင့်အတူ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများကို တရုတ်အစိုးရက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စနိုင်ရန် ဆွဲဆောင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ ယခင်က တရုတ်အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံထားရသော ယခုအစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များဘက်တွင်လည်း ဖိအားများ ရှိနေသည်။
မကြာသေးမီအချိန်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ CPI ၌ အကြီးစားရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဧရာဝတီ မြစ်ညာ-မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ (ACHC) က ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာမည့်အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ ပြောကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော အာရှအသံ (RFA) က ‘ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်’ အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မေးမြန်းခဲ့ပြီး ထိုမေးမြန်းမှုကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
“ညှိနှိုင်းရမှာပေါ့။ မညှိနှိုင်းလို့ ဘယ့်နဲ့လုပ်မလဲ။ ဘာလဲဆိုတော့ အခုအစိုးရက တကယ်တော့ ဒီစီမံကိန်းကြီးကို တန်းလန်းကြီးထားပြီးတဲ့ သဘောပဲ။ တာဝန်မယူတဲ့သဘော ဖြစ်တာပေါ့။ တကယ်ဆိုရင် အစိုးရဆိုတာ တာဝန်ယူရမှာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ အခုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အခုအစိုးရထဲက လူအများစုဟာ အရင်အစိုးရထဲမှာ ပါခဲ့တာပဲ။ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို သဘောတူခဲ့တုန်းကလည်း ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပဲ။ အခုမှ မဆိုင်သလိုလုပ်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ငါးနှစ်ရပ်ထားတယ်ဆိုတာ နောက်လာမယ့် အစိုးရမှပဲ တာဝန်ယူတော့လို့ ပြောတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲဒါတော့ အစ်မကမကြိုက်ဘူး။ အစိုးရတိုင်းဟာ တာဝန်ယူရဲတဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိရမယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က လွှတ်တော်ရုံး၌ ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပေါ် သူရဦးရွှေမန်း၏ သဘောထားကို သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာ၌ သူရဦးရွှေမန်းက “မိမိကိုယ်မိမိ သမ္မတလောင်းလို့တော့ မိမိဒီလိုမယူဆထားပါဘူး။ မိမိသည် နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်နိုင်သမျှ စွမ်းဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ အခြေအနေပေးရင်ပေးသလို ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က RFA သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားအပြီး “မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထားပြတ်သားမှု မရှိကြောင်း” The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားခဲ့သည်။
“မြစ်ဆုံကိစ္စက လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စလို မဟုတ်ဘူး။ ညှိနှိုင်းစရာမလိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ယတိပြတ်ပြောရမှာပါ။ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မယ့်ကိစ္စကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူရဦးရွှေမန်းပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးရနိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ လူထုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြေဆိုထားဖို့ လိုပါတယ် ....” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က အဆိုပါသတင်းတွင် ပြောကြားထားသည်။
ထိုသတင်းဖော်ပြအပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းမြင့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောစကားအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြားချက်တစ်ရပ်ကို NLD Facebook မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
NLD ပါတီထောက်ခံသူ အချို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်အတိုင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ယခုအစိုးရတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ‘မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထား ပြတ်သားမှုမရှိကြောင်း’ ပြောကြားခဲ့သည့် Eleven Media Group CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နှင့် Eleven Media Group တို့အား ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
8/23/2013 09:11:00 AM Myanmar-news
သြဂုတ် ၁၉ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က မိတ္ထီလာမြို့တွင် ၎င်းစီးနင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်အား လူအယောက် ၂၀၀ ခန့်က ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည် ဟူသော ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနား၏ ပြောကြားချက်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အစိုးရ၊ အဆိုပါ ယာဉ်တန်း ဖြတ်သန်းသွားချိန်တွင် ရှိနေခဲ့သော မျက်မြင် သက်သေများနှင့် မိတ္ထီလာမြို့ခံများက ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားသည် သြဂုတ် ၂၁ ရက် ညပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ မထွက်ခွာမီ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ္ထီလာ၌ မိမိစီးနင်းလာသော မော်တော်ကားအား လူ ၂၀၀ ခန့်က ထုရိုက်ခြင်း၊ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များကို ကန်ကျောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အနားတွင်ရှိသော ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကာအကွယ် လုံးဝမရှိသည့် အခြေအနေတွင် ခံစားရသော အကြောက်တရားသည် ပြီးခဲ့သော မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှု၌ ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်က လူ ၄၃ ဦးကို ရိုက်နှက်ပြီး မီးရှို့သတ်ဖြတ် ခဲ့သည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရပ်ကြည့်နေသည် ဆိုသော စွပ်စွဲမှုကို သွားမြင်မိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။
ဓမ္မစက်၊ အာဏာစက်ဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းရတော့မည်၊ သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးနေသည်အထိ အမြင်ရောက်စေသော ရဟန်းအချို့၏ အမှုအခင်းနှင့် ဖြစ်ရပ်များ
2/24/2014 10:51:00 AM crime-news
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာများကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သာသနာ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေကြသော သံဃာထုအတွင်း သံဃာတော်များအပေါ် အကြည်ညိုပျက်စေအောင် လုပ်ဆောင်နေသော ရဟန်းအချို့၏ အမှုအခင်းများကို ဓမ္မစက်၊ အာဏာစက်များဖြင့် ထိရောက်စွာဖြေရှင်းရမည့်အချိန် ကျရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရဟန်းအချို့အပေါ် ၀ိနည်းလေးစားလိုက်နာမှု မရှိဟူသော စွပ်စွဲချက်များသာမက သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသော တိုင်ကြားမှုများ ရှိနေပါသည်။ ထိုတိုင်ကြားမှုများထဲတွင် များသောအားဖြင့် ရဟန်းတော်အချို့ ညပိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခြင်း၊ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ပိုက်ဆံလှည့်လည် အလှူခံခြင်း၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းနှင့် လောင်းကစား ကိစ္စရပ်များ ပြုလုပ်နေကြခြင်းအပြင် သံဃာလောကတွင် အမြင့်ဆုံးပြစ်မှုဖြစ်သော ပါရာဇိကကျမှုများဖြင့်လည်း စွပ်စွဲမှုများရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ စွပ်စွဲမှုများ ရှိနေရာတွင် အချို့သော ရဟန်းများမှာ အတုအယောင်များ ဖြစ်နေခြင်း၊ သင်္ဃန်းခြုံ၍ သံဃာအယောင်ဆောင်ခြင်းများ ဖြစ်သည့်နည်းတူ အချို့သော ရဟန်းများမှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ ရှိနေရာမှ ၀ိနည်းလေးစားလိုက်နာမှု မရှိသော ပြစ်မှုဟု ယူဆနိုင်သည်များကို ကျူးလွန်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Eleven Media Group က မကြာသေးမီအချိန်တွင် လက်ခံရရှိခဲ့သော ပေးစာအချို့တွင် ၀ိနည်းနှင့်လျော်ညီမှု မရှိသည့် ရဟန်းအချို့ကို စွပ်စွဲတိုင်ကြားထားသည့် စာများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထိုအထဲတွင် နိုင်ငံတော် သံဃာဗဟိုဝန်ဆောင် ရဟန်းတစ်ပါးအား ပါရာဇိကဖြင့် စွပ်စွဲမှု၊ ရဟန်းတစ်ပါးက မာတုဂါမတစ်ဦးအား ကိုယ်ဝန်ရသည်အထိ တိတ်တဆိတ် ပေါင်းသင်းခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲမှု တိုင်ကြားစာများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထိုပေးစာများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး တိုင်ကြားသူများ၏ အခြေအနေ၊ စွပ်စွဲခံခဲ့ရသူ ရဟန်း၏ အခြေအနေများ၊ နေရာဒေသများကို စုံစမ်းခဲ့ရာတွင် စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများသည် အခြေအမြစ်မရှိ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မဟုတ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Eleven Media Group ကလက်ခံရရှိခဲ့သော တိုင်ကြားစာများသည် ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒဖြင့် သီးခြားပေးပို့လာသော စာများမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ထံသို့ လိပ်မူဆက်ကပ်ခဲ့သည့် တိုင်ကြားစာများကို တစ်ဆင့်လက်ခံအနေဖြင့် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့သို့ ဆက်ကပ်တိုင်ကြားခဲ့သော စာများ၌ “သာသနာတော်ကြီးအား တိုးတက်စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုး တည်တံ့ခိုင်မာအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တော် မူနေကြသည့် ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်ကြီးများနှင့် ရဟန်းသာမဏေ၊ သီလရှင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် အများအပြား ရှိသလို သာသနာတော်ကြီး ညှိုးနွမ်း၊ ပျက်စီးအောင် ပြုမူလုပ်ကိုင်နေသည့် အရည်းကြီး ရဟန်းများနှင့် ရဟန်းတု၊ ရဟန်းယောင်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သာသနာတော်ကြီးတွင် အများအပြား ရှိနေသည်ကို ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် တွေ့မြင်နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်”၊ “… ရဟန်းဝတ်များ အရက်သေစာ သောက်စား၍ မူးယစ်ရမ်းကားနေသော သတင်း၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဘတ်(စ်)ကားများ၊ ကားမှတ်တိုင်များတွင် လှည့်လည်အလှူခံခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီး၊ လူဝတ်လဲလှယ်စေခြင်း၊ ရဟန်းတော်များနှင့် မသက်ဆိုင်သော မြေယာအရောင်းအ၀ယ် အမှုများနှင့် အဆိုးဆုံးမှာ မာတုဂါမများနှင့် တိတ်တဆိတ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရာမှ ရရှိလာသော ကိုယ်ဝန်အား ဖျက်ချ၍ ဆိုးဝါးသောပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းများကိုပါ ငရဲမကြောက်၊ အပါယ်မကြောက်ရုံ သာမက ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခံရ၍ ရရှိထားသော ၀တ္ထုငွေကြေးများကိုပါ ၎င်းမာတုဂါမများနှင့် ပျော်ပါးထောက်ပံ့ သုံးစွဲနေကြသည်ကိုပါ တွေ့မြင်ကြားသိနေရပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအချို့တွင် သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးနေသည်က နည်းနည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ မာတုဂါမများနှင့် နေထိုင်ကြသည်က များများ တွေ့မြင်နေရပါသည်”၊ “တချို့ကျောင်းများတွင် ဘော်ဒါဆောင်များသဖွယ် ယောက်ျားမိန်းမမရွေး အခကြေးငွေယူ၍ ထားရှိကြသည်ကိုလည်း ကြားသိမြင်တွေ့ရပါသည်။ နှစ်လုံးထီထိုးသော ဘုန်းကြီး၊ ချဲဒိုင်ကိုင်သော ဘုန်းကြီး၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းသော ဘုန်းကြီး အများအပြား ရှိနေကြပါသည်”၊ “ပြည်သူများကြားတွင် ရဟန်းအချို့ကို ချဲဘုန်းကြီး၊ စီးပွားရေးဘုန်းကြီး၊ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီး၊ အရည်းကြီးဘုန်းကြီးများဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်နေကြသည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလွန်းလှပါသည်” ဟူ၍ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက် အဆိုပါ ဆက်ကပ်တိုင်ကြားစာများ၌ပင် သာသနာတော်ကြီး ပျက်စီးထိခိုက်နစ်နာ၊ ညှိုးနွမ်းစေမည့် ကိစ္စရပ် အမှုတွဲနှစ်ခုကို ပူးတွဲဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး အမှုတစ်ခုသည် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (၀ိနိစ္ဆယအဖွဲ့ငယ်) သီးခြားဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့အမှတ် (၁/၂၀၁၃) ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့် (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပုဒ်-၅၇/က) အရ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခဲ့သော အမှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့သို့ ဆပ်ကပ်တိုင်ကြားရာ၌ သာဓကပြဆိုခဲ့သော အမှုနှစ်ခုအနက် တစ်မှုမှာ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ကျန်တစ်ခုသည် မန္တလေးတိုင်း မိထ္ထီလာခရိုင် မလှိုင်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုတို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်—၏ နေအိမ်သို့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရောက်ရှိလာပြီး လင်ယောက်ျားရှိသည့် ရက်များတွင် ဆွမ်းဘုဉ်းပြီးသာ ပြန်သွားလေ့ရှိကြောင်း၊ လင်ယောက်ျားမရှိသည့် ရက်များတွင်မူ နှစ်ဦးစလုံး လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဘဒ္ဒန္တ —- က ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဒေါ်—- ၏ နေအိမ်သို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ နေအိမ်သို့လည်း လာရောက်နေထိုင်ကြောင်း . . . . .
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က ၀ိနိစ္ဆယအဖွဲ့ငယ်ဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့သည့် ဘားအံမြို့နယ်မှ အမှုသည် အနုဝါဒါ အဓိကရုဏ်းမှုခင်း၌ စွပ်စွဲ(တိုင်ကြား)သူ မာတုဂါမ ဒေါ် —- က စွပ်စွဲခံခဲ့ရသူ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃ၀န်ဆောင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ —- အား သူမနှင့် ၁၃ နှစ်ခန့် တိတ်တဆိတ် ပေါင်းသင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး နိုင်ငံတော် သံဃနာယကအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်ကြားစာ၌ပင် စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- သည် ကာမပိုင် လင်ယောက်ျားရှိပါလျက်နှင့် ဗဟိုသံဃ၀န်ဆောင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ —- နှင့် ဖောက်ပြန်ခဲ့ပါသည်ဟုလည်း ၎င်း၏အပြစ်ဝန်ခံချက်နှင့်တစ်ကွ ဖော်ပြခဲ့သည်။
တိုင်ကြားစာကို စတင်ပေးပို့စဉ်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ကမ္ဘာအေး သံဃ၀ိနိစ္ဆယ ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ထံသို့ ဆက်ကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စွပ်စွဲခံရသည့် စုဒိကတ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဝန်ဆောင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ —- က အမှုတွဲကို သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးသို့ မရောက်ရှိအောင် လူလွှတ်၍လည်းကောင်း၊ စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- အပေါ် အများတကာ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသည့် စကားများအား ပြောခိုင်း၍လည်းကောင်း၊ မိသားစုအား ပြဿနာအမှားအယွင်းဖြစ်အောင် တပည့်သံဃာများနှင့် လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏ဆွေမျိုး ညီအစ်ကိုများဖြင့် လည်းကောင်း၊ အောက်လမ်းပညာဖြစ်စေသည်အထိ လိုက်လံနှောင့်ယှက်ခြင်းများ ရှိခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားစာဆက်ကပ်အပြီး ၁၇ ရက်အကြာတွင် ထပ်မံပေးပို့ခဲ့သည့် အသနားခံလွှာတွင် ဒေါ် —- က ရေးသားခဲ့သည်။
အသနားခံလွှာ ပေးပို့အပြီးတွင် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က သီးခြားဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် စွပ်စွဲခဲ့သော ကျူးလွန်မှုများအဖြစ် (က) ပထမ ပါရာဇိက မေထုန်မှီဝဲမှု (ခ) အာပတ္တာဇိကရုဏ်း၊ အနုဝါဒါဓိကရုဏ်း (ဂ) ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇူလိုင် ၆ ရက်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းများဟူ၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခြင်း ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- က ၀န်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။
စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ စွပ်စွဲခံရသူ ဘဒ္ဒန္တ —- သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ပြီး ဒေါ်—- ၏ နေအိမ်သို့ ညနေပိုင်းတွင် စက်ဘီးဖြင့် လာရောက်တတ်ကြောင်း၊ လာသည့်အခါတွင် ညနေစာထမင်းဟင်းများကို ည ၇ နာရီခန့်တွင် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရကြောင်း၊ ညနေစာ စားသောက်ပြီးချိန်တွင် ဒေါ်—-အား နှိပ်ပေးလေ့ရှိကြောင်း၊ အိပ်ခိုင်းပြီး ခြေသလုံးနှင့် ပေါင်များကိုလည်း နှိပ်ပေးလေ့ရှိကြောင်း၊ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီခန့်အချိန်တွင် ပြန်ကြောင်း၊ လင်ယောက်ျားမရှိသော တစ်ရက်တွင် ဘဒ္ဒန္တ —- က ဒေါ်— အား ချစ်ကြိုက်ကြောင်းပြောပြီး ကျူးလွန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်—၏ နေအိမ်သို့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရောက်ရှိလာပြီး လင်ယောက်ျားရှိသည့် ရက်များတွင် ဆွမ်းဘုဉ်းပြီးသာ ပြန်သွားလေ့ရှိကြောင်း၊ လင်ယောက်ျားမရှိသည့် ရက်များတွင်မူ နှစ်ဦးစလုံး လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဘဒ္ဒန္တ —- က ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဒေါ်—- ၏ နေအိမ်သို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ နေအိမ်သို့လည်း လာရောက်နေထိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘဒ္ဒန္တ —- သည် ခြေချော်လဲရာမှ အရိုးအက်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုအချိန်၌ ဒေါ်—- ၏ နေအိမ်၌ပင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်—- အား လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက မော်လမြိုင်အပိုင် ကျိုက်မရောရှိ ရော်ဘာခြံသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ရောက်ရှိပြီး လင်ယောက်ျားမရှိသည့် အချိန်များတွင် ဘဒ္ဒန္တ —- ရောက်ရှိလာပြီး ဒေါ် —-နှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ တည်းခိုခန်း၌ တည်းခိုစဉ် ကာလတွင်လည်း ကျူးလွန်မှုများ ရှိခဲ့သည့်အပြင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ဘဒ္ဒန္တ —- ကို ဖမ်းလိုသဖြင့် လာရောက်ရှာဖွေ စစ်ဆေးခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေါ်—-က ထွက်ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စကားပြော အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းများကို အကြောင်းပြုပြီး ဘဒ္ဒန္တ —- က ဒေါ်—- ကို နှိပ်စက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ညာလက်တစ်ဖက် ကျိုးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ပြန်အဆင်ပြေခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်များအတိုင်း လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုက်လအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အစရှိသည်တို့ကို ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး ဘဒ္ဒန္တ —- ၏ ကျောင်းတွင်ရှိနေပြီး ဒေါ်—- ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကျောက်ပျဉ်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ တီဗွီ၊ ဗီရိုနှင့် အိုးခွက်အသုံးအဆောင်များကိုလည်း ဒေါ် —- က သက်သေအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့သည်။
စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ဘဒ္ဒန္တ —- ကို သီးခြားဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့က စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘဒ္ဒန္တ —- ကလည်း ခုခံချေပ လျှောက်တင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘဒ္ဒန္တ —- ၏ ထွက်ချက်များတွင် မိမိသည် သက်တော် ၅၅ နှစ်၊ သိက္ခာ ၃၅ ၀ါရှိပြီဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃ၀န်ဆောင်အဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုတိုင်ကြားခံရမှုသည် အပင်မြင့်၍ လေတိုက်ခံရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒေါ် —-၏ စွပ်စွဲချက်များ မမှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်—- နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကပင် သိကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ခြံမြေ၀ယ်သော ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီပေးရာမှ ပိုမိုရင်းနှီး သိကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်—- သည် ချဲထီလောင်းကစား အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်၍ ခြံအားပေါင်နှံခြင်း၊ အကြွေးဖြင့် အသိမ်းခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာ၍ အကြွေးပတ်လည် ၀ိုင်းနေသဖြင့် — ရွာရှိ —- ရော်ဘာခြံသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ရေးအတွက် အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုခြံသည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော ရော်ဘာခြံသာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိထူထောင်၍ အောင်မြင်လာသော ရော်ဘာခြံကို ဒေါ်—-က တောင်းဆိုမှု ပြုလာရာမှ မပေးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ စွပ်စွဲမှု ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်—- နှင့်မိသားစုများ ရော်ဘာခြံအတွင်း စတင်နေထိုင်စဉ်က စားသောက်စရိတ် အနည်းငယ် ပေးကမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ လောဘတက်လာပြီး မကောင်းကြံစည်လာ၍ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း မပြုတော့ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်—- နှင့် မေထုန်မှီဝဲမှု စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ဖမ်းဆီးရန် လာရောက်ရှာဖွေသည် ဆိုခြင်းမှာလည်း မမှန်ကြောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ရင်းနှီးသော ဒကာ၊ ဒကာမများက ပစ္စည်းပစ္စယများ အပ်နှံထားသည်မှာ မဆန်းကြောင်း၊ ဒေါ်—-၏ ပစ္စည်းများ ကျောင်း၌ရှိသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဒေါ် —- ၏ လက်ကျိုးခြင်းမှာလည်း နှိပ်စက်ကန်ကျောက်၍ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်—-၏ အလုပ်မကြိုးစားမှု၊ လောင်းကစား ၀ါသနာပါနေမှုတို့ကြောင့် ပြောဆိုစဉ် ဒေါ်—-က ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုပြီး ကျောင်းတိုက်အား ပုတ်ခတ်စော်ကားသဖြင့် ဒေါသအလျောက် ကန်ကျောက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဒေါ်— သည် မိမိ၏ ဂုဏ်ကျော်ဇောမှုကို မလိုလားဘဲ ၎င်း၏လောင်းကစား ၀ါသနာပါမှုကြောင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှု ဖြစ်လာပြီး မိမိထူထောင်ထားသည့် ရော်ဘာခြံကို ရယူလိုသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံစွပ်စွဲခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဘဒ္ဒန္တ —- က ပြန်လည်ချေပခဲ့သည်။
စစ်ဆေးမှုများအတွက် အဆုံးသတ်အဖြေ မထွက်ပေါ်မီ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်းတွင် စွပ်စွဲသူ ဒေါ်—- က ဘဒ္ဒန္တ —- အား ပထမပါရာဇိက အမှုဖြင့် စွပ်စွဲခြင်းအား ရုပ်သိမ်းပြီး နောက်နောင် ထပ်မံစွဲဆိုခြင်း မပြုလုပ်တော့ကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုခဲ့သည်။
ထို့နောက် အမှုကို စစ်ဆေးခဲ့သည့် သီးခြားဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့က “စောဒကမှ အမှုကို ရုပ်သိမ်းလွှာတင်သွင်း၍ နောက်နောင်တွင်ထပ် မံစွဲဆိုမှု မပြုတော့ပါကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်ပေး၍ ၀ိ-လုပ်ထုံး/၃၇(ဂ)/၀ိလက်စွဲ အပိုဒ် ၁၄၄ အရ အမှုအား ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန် အမှုပိတ်ကြောင်း” ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ၄၇ ပါးမှာ ၁၅ ပါးစီ လေးလတစ်ကြိမ် တာဝန်ယူရပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာမှာ တချို့မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့်လို သံဃနာယကတွေက အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ တိုင်ကြားမှုတွေ အကုန်လုံးက နိုင်ငံတော် သံဃနာယက အဖွဲ့ဆီကိုပဲ ရောက်လာပြီး အမှုတွေ များသွားတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ကြန့်ကြာတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ် . . . . .
ထို့ကြောင့် ထိုကိစ္စရပ်အတွက် အမှုမှန်ဖြစ်စဉ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အလွယ်တကူ စွပ်စွဲပြစ်တင်၊ အလွယ်တကူ ကျေအေးလွှာဖြင့်သာ အလွယ်တကူ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး အမှု၏ အမှန်တရားမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
Eleven Media Group က စွပ်စွဲခံရသူနှင့် စွပ်စွဲသူနှစ်ဦးစလုံးကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်မှု မရရှိခဲ့ပေ။
ဘားအံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုတစ်ခုနည်းတူ နောက်ထပ်အမှုတစ်ခုမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိထ္ထီလာခရိုင်၊ မလှိုင်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုဖြစ်သည်။
ထိုအမှုတွင် သက်တော် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ရဟန်းတစ်ပါးနှင့် မာတုဂါမတစ်ဦးတို့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရာမှ ရဟန်း၏ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုများကြောင့် လွန်ကျူးမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ခြင်းကို နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ထံ ဆက်ကပ်တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်းကြားသူ မ —- က ၎င်းကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်အတွက် နောင်တကြီးစွာရကြောင်းနှင့် ရဟန်း—- နှင့် ရရှိခဲ့သော ကိုယ်ဝန်ကို နှစ်ဦးတိုင်ပင်ပြီး နှစ်ဦးသဘောတူဖြင့် ဖျက်ချမိခဲ့သည်ဟု ရေးသားပြီး အဖြစ်အပျက်အစုံကို လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရရှိပြီးနောက် ဖျက်ချရန်နှင့် ၀ါကျွတ်တွင် လူထွက်ပြီး ပေါင်းသင်းမည်ဟု ရဟန်းက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးချိန်တွင် မ—- အား ရဟန်း—- က အတွေ့မခံတော့ဘဲ ရှောင်သွားပြီး ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုပင် အလုပ်မခံတော့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် နေထိုင်နေသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှပင် နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စရပ်အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း ရဟန်း —- မှာ ပေးထားသော နှုတ်ကတိကို အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရဟန်း—- အား လူထွက်ပြီး ပေးထားသော ကတိအတိုင်း တာဝန်ယူစေလိုကြောင်းနှင့် ရဟန်း—- ထံမှ မည်သည့်ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းကို ရယူလိုသည့်အတွက် တိုင်တန်းရခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ဆက်ကပ်တိုင်ကြားစာ၌ မ—- က ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍မူ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က မည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မသိရှိရသည့်အပြင် ကာယကံရှင်များကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု မရရှိခဲ့ပါ။
ဓမ္မစက်ဖြင့် အရေးယူမှု နည်းပါးခြင်း
အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်များသည် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့သို့ ဆက်ကပ်ပေးပို့ခဲ့ပြီး Eleven Media Group က လက်ခံရရှိခဲ့သော တိုင်ကြားစာများထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော တိုင်ကြားစာများ ရှိနေသော်လည်း နိုင်ငံတော် သံဃနာယက အဖွဲ့၏ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများ ရှိနေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရဟန်းသံဃာ အရေအတွက် ငါးသိန်းခန့်ရှိနေပြီး ဂိုဏ်းအလိုက် ခွဲတန်းဖြင့် မြို့နယ်၊ တိုင်း၊ ဗဟို သံဃ၀န်ဆောင်အဖွဲ့များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့အဆင့်ဆင့် တင်မြှောက်ထားသည့် ဗဟိုသံဃ၀န်ဆောင် အရေအတွက် အပါး ၂၉၀ ခန့်ရှိပြီး ထိုသံဃာများထဲမှ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကို ပြန်ရွေးချယ်ရသည်။ ထိုသံဃနာယကအဖွဲ့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သံဃာအားလုံး၏ အချုပ်ဖြစ်ပြီး သံဃာအမှုအခင်းများတွင် တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်သည်ဟု သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ၄၇ ပါးမှာ ၁၅ ပါးစီ လေးလတစ်ကြိမ် တာဝန်ယူရပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာမှာ တချို့မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့်လို သံဃနာယကတွေက အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ တိုင်ကြားမှုတွေ အကုန်လုံးက နိုင်ငံတော် သံဃနာယက အဖွဲ့ဆီကိုပဲ ရောက်လာပြီး အမှုတွေ များသွားတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ကြန့်ကြာတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်” ဟု သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
သံဃနာယက အဖွဲ့များအတွင်း တိုင်ကြားလာသော အမှုအခင်းများကို ဖြေရှင်းရာ၌ အားနည်းမှုများ ရှိနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြု တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိက ဆရာတော်တစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။
“သံဃနာယကအဖွဲ့တွေ အလုပ်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ လုပ်နေတယ်။ ဖိဖိစီးစီးလုပ်တာ အားနည်းနေတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ အဓိကကတော့ သံဃနာယက အဖွဲ့တွေက ထက်အောက်အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတာက အဓိကလို့မြင်တယ်။ အောက်ခြေပြတ်တော့ မနိုင်မနင်း ဖြစ်လာတာရော၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေတာကြောင့်ရော ဒီလိုအမြင်မတင့်တယ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ ဖြေရှင်းမှု နည်းလာတယ်” ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြု တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိကဆရာတော်က မိန့်ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပါရာဇိက ပြစ်မှုများအပြင် ရဟန်းတော်အချို့ ညဘက်ဆိုင်ထိုင်ခြင်း၊ ညပိုင်းတွင် စားသောက်ဖွယ်ရာများ သုံးဆောင်ခြင်း၊ လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း၊ မာတုဂါမများနှင့် ပျော်ပါးခြင်း အစရှိသည်တို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်းများက သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းစေခြင်းများ ဖြစ်စေသည်ဟူသော မိန့်ကြားမှုများလည်း ရှိနေသည်။
“၀ိနည်းမလိုက်နာတဲ့ သံဃာဆိုတာက ဘုရားလက်ထက်တော်ကတည်းက ရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ ဘုရားက သိက္ခာပုဒ်တွေ ပညတ်ခဲ့ရတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေက သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေပါတယ်။ သံဃာတော်တွေဟာ မကြည်ညိုသေးတဲ့သူတွေ ကြည်ညိုလာစေဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ရဟန်းတချို့ကြောင့်လို့ ဆိုပေမဲ့ မြင်မိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့။ ဘာသာခြားအမြင်မှာလည်း မတင့်တယ်နိုင်ဘူးလေ” ဟု မဟာဓမ္မရောင်ခြည် ကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်ဓမ္မလောကက မိန့်ကြားသည်။
ရဟန်းအချို့၏ သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းပျက်စီးစေရန် အထင်ရောက်စေသော ဖြစ်ရပ်များအတွက် သံဃာမဟာနာယက အဖွဲ့သို့ ဆက်ကပ်တိုင်ကြားခဲ့သည့် ပေးစာများတွင် အမှုမှန်များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဓမ္မစက်ဖြင့်သာ မကဘဲ အာဏာစက်ဖြစ်သော အရပ်ဘက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူမှု ပြုလုပ်သင့်သည်ဆိုသော စာများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ ရောက်ရှိလာသော အမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုကြောင်း ဆိုသည်။
“အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်း လိုတယ်။ သံဃနာယကအဖွဲ့က သြ၀ါဒပေးတာမျိုးပဲ လုပ်ရပြီး ကျန်တဲ့အရေးယူတာမျိုးက ရဲတပ်ဖွဲ့လို အာဏာပိုင်တွေက လုပ်မှရတာ” ဟု သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
“သံဃနာယကအဖွဲ့တွေနဲ့အတူ အာဏာပိုင်တွေကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်။ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ချင်းစီကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ ရဟန်းတွေ အမြင်မတော်တာ ဖြစ်နေရင် ဆိုင်ရာသံဃနာယကအဖွဲ့ကို တိုင်၊ သံဃနာယကအဖွဲ့ကလည်း ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်၊ အဲဒါဆိုရင် အမြင်မတော်မှုတွေ အများကြီး လျော့နည်းသွားမှာပါ” ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိက ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သာသနာတွင်း၌ လူအများ အကြည်ညိုပျက်အောင် ၀ိနည်းသိက္ခာ မလေးစားသော သံဃာအချို့ ရှိနေသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပြီး သာသနာတော်ကို လူအများ အထင်အမြင်လွဲမှားမှု မဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ မနာပဒါယီကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပဒါယီ)က မိန့်ကြားသည်။
“သာသနာတော်ထဲမှာ အနေအစားချောင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် တချို့တွေက ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေက သင်္ကန်းဝတ်ထားပေမယ့်လည်း ၀ိနည်းကို လေးစားလိုက်နာတာမျိုး မရှိဘူး။ အရင်အစိုးရ ခေတ်မှာတုန်းက သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရင် ပြီးရောဆိုပြီး အကုန်လုံး အရေးမယူဘဲ လွှတ်ပေးထားတော့ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ ၀ိနည်းလေး စားလိုက်နာခြင်း မရှိတဲ့ ရဟန်းတွေကို စိစစ်ရှင်းလင်းမှု လုပ်သင့်ပါတယ်” ဟု ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပဒါယီ)က မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် တရားတော်များအနက် ၀ိနည်းဆိုသည်မှာ သံဃာတော်များ လိုက်နာအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ၀ိနည်းတွင် အမျိုးအစား ခုနစ်မျိုးရှိပြီး အပြစ်အနိမ့်အမြင့် အစဉ်လိုက်အားဖြင့် ပါရာဇိက၊ သံဃာဒိသိသ်၊ ထုလ္လစ္စည်း၊ ပါစိတ်၊ ဒုက္ကဋ်၊ ဒုဗ္ဘာသိဟု ခွဲခြားထားသည်။ ယင်းဝိနည်းများနှင့် ငြိစွန်းမှုကို အပြစ်သက်ရောက်သည်။ ပါဠိအားဖြင့် အာပတ်သင့်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ အာပတ်ခုနစ်မျိုးအနက် ပါရာဇိကနှင့် သံဃာဒိသိသ်မှာ ပြင်းထန်သော အာပတ်များဖြစ်ကြပြီး ကျန်သည့်အာပတ်ငါးမျိုးမှာ အစဉ်လိုက် အပြစ်သက်ရောက်သည့် အနုစား အာပတ်များ ဖြစ်ကြသည်။ အာပတ်သင့်ပြီးနောက် ပြစ်ဒဏ်ကျေအောင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ရမှုကို အာပတ်ဖြေသည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ အာပတ်ဖြေရာ၌ ထုလ္လစ္စည်းနှင့် အောက်အနုစား အာပတ်များမှာ သံဃာတော်တစ်ပါးခြင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ပါးသုံးပါးကိုဖြစ်စေ မိမိ၏အပြစ်ကို ၀န်ခံပြီး နောင်မပြုလုပ်ရန် ၀န်ခံကတိပြုခြင်းဖြင့် အာပတ်သင့်ခြင်းကို ဖြေဖျောက်နိုင်သည်။ သို့သော် ပါရာဇိကအပြစ်သည် သင့်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြေစွမ်းနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ယခုဘ၀တွင် ရဟန်းဘ၀ သေဆုံးသွားရသည်။ သံဃာဒိသိသ် အာပတ်သည် ပြန်ဖြေနိုင်သော်လည်း ရဟန်းတော်တစ်ပါးခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ပါးသုံးပါးနှင့် ဖြေစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သံဃာထုက ကူညီဖြေရှင်းပေးမှသာ အာပတ်သင့်နေခြင်းကို ကုစားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က Facebook တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပုပ်ချထားသည့် ဓာတ်ပုံအတုကို Share ခဲ့သော ဇနီးသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်ခဲ့မှုကို ဘီဘီစီသတင်းဌာန ပြန်လည်ဖော်ပြ
6/11/2014 11:48:00 AM Myanmar-news
ဇွန် ၉ ရက်က ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားမှုအား တွေ့ရစဉ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က Facebook တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပုပ်ချထားသည့် ဓာတ်ပုံအတုကို Share လုပ်ခဲ့သော ဇနီးသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်ခဲ့ရခြင်းကို ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၌ ဇွန် ၉ ရက်တွင် သတင်းပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကို ဇွန် ၆ ရက်က ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် သုံးရက်အကြာတွင် ဘီဘီစီက ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်၏ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းသည် ဇွန်၅ရက်တွင် ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပုပ်ချထားသည့် ဓာတ်ပုံတုတစ်ပုံကို Share ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် Facebook သုံးစွဲသူများက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန် ၆ ရက်တွင် ဦးရဲထွဋ်က ၎င်း၏ Facebook မှတစ်ဆင့် ဇနီးသည်၏အပြုအမူအပေါ် တောင်းပန်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော့်ဇနီးသည်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ မနေ့ကမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ရာရောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဇွန် ၆ ရက်တွင် ၎င်း၏ Facebook ၌ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးထောက်ခံသူများကိုလည်းကောင်း တောင်းပန်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။
ဦးရဲထွဋ်က ဇနီးသည်၏ အပြုအမူအပေါ်တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း ထိုတောင်းပန်ချက်ရေးသားထားသော ပို့စ်အောက်တွင် comment ၀င်ရောက်ရေးသားခဲ့သူများက သံသယဖြင့် တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့သည်။
သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်သည် မကြာသေးမီအချိန်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောဆိုမှုများအား ကလေးဆန်သည်ဟု တရားဝင်မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဦးရဲထွဋ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်သော အမြင်များကို ပြောဆိုရာ၌ မေးခွန်းထုတ်စရာများရှိနေခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း Facebook ပေါ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပုပ်ချတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားများသည် ဦးရဲထွဋ်၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်၌ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသော သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်။
အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ကို ပုတ်ခတ်စော်ကားသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ရသည့် Voice of Myanmar ဘလော့နှင့် ဘလော့ဂ်ရေးသူ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ဦးရဲထွဋ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားမှုများရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အပုပ်ချတိုက်ခိုက်ရေးသားသည့် စာများအား သုံးနှစ်ကြာ ဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ၌ လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ဦးရဲထွဋ်ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားမဟုတ်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော Eleven Media Group ကမူ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ဦးရဲထွဋ်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တထစ်ချပြောကြားခဲ့သည်။ Eleven Media Group ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းချိန်တွင်ရှိနေခဲ့သော စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (ယခင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပိတောက်မြေရေဒီယိုတွင် သုံးနှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ) ဦးလှဆွေက Eleven Media Group ၏ ပြောကြားချက်များကိုထောက်ခံပြီး ဦးရဲထွဋ်သည် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၀င်ရောက်ဖြည့်စွက်ပြောကြားခြင်း ရှိခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မည်သူမည်ဝါကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာအရ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားမည်သူဆိုသည်ကို အတိအကျပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်းနှင့် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးအုပ်စုတစ်စုတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည့်အပြင် “ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် အမှောင်ထဲက ခဲဖြင့်ပေါက်ခြင်းသာဖြစ်နေပြီး အမှန်တရားကို တာဝန်ယူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရဲသူမဟုတ်ဟု ယူဆကြောင်း” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်ကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုဝေဖန်ပြီး အစိုးရမူဝါဒများကောင်းကြောင်း ၀ါဒဖြန့်ချိရေးလုပ်ခဲ့သည့် ပိတောက်မြေရေဒီယိုမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သီးသန့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ ပိတောက်မြေရေဒီယိုကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်းက တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး အသံထုတ်လွှင့်ချက် ရေးသားသူများထဲတွင် ဦးမြတ်သူ၊ ဦးကိုကိုလှိုင်တို့နှင့်အတူ ဦးရဲထွဋ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးရဲထွဋ်သည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်းလက်ထက်တွင် အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးဌာနကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးဖြစ်လာသည့်အပြင် သမ္မတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာဝန်ကိုပါ ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ သတင်းဖော်ပြချက်တွင် ဦးရဲထွဋ်အား “Facebook Minister” ဟု သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ – See more at: